Lionel Messi oo u sheegay Madaxda Barcelona in uusan doonaynin in kooxda la keeno xiddigan ka tirsan PSG! - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Lionel Messi oo u sheegay Madaxda Barcelona in uusan doonaynin in kooxda la keeno xiddigan ka tirsan PSG!
Weeraryahanka Barcelona ee Lionel Messi ayaa la soo warinayaa inuusan doonaynin in Marco Verratti uu ku soo biiro kooxda ku dheesha garoonka Camp Nou.
Sida uu warinayo Warsidaha Diario Gol ee laga aqristo dalka Spain, Lionel Messi ayaa u sheegay madaxda kooxda Barcelona uusan doonaynin inuu Barca ku soo biiro laacibka iminka ka tirsan Paris Saint-Germain ee Marco Verratti.
Xiddiga xulka qaranka Talyaaniga ayaa si weyn loola xiriirinayey muddooyinkii dhawaa inuu u dhaqaaqi doono garoonka Camp Nou oo ay ka dhisan tahay kooxda Barcelona si uu bedel ugu noqdo Xavi ama Andres Iniesta.
Laakiin Kabtanka xulka qaranka Argentina ee Leo Messi ayaa la soo sheegaya inuu maamulka kooxda Barca si cad ugu sheegay inuusan doonaynin in xiddigan khadka dhexe uu kula soo biiro kooxda, kaddib markii ay PSG guuldarro ka soo gaartay Real Madrid.
Si kastaba ha ahaatee, Verratti ayaa weli laga yaabaa inuu ku ciyaaro dalka Spain, haddii warbixin soo baxday ay tahay mid run ah, taasoo sheegeysa in Real Madrid ay raadineyso bedelka muddada dheer ee Luka Modric, ayna u aragto xiddigan kooxda PSG ee Verratti.